सलमान खान: काँग्रेसबाट लोकसभा चुनाव लड्दै ! » Nepal Fusion	Nepal Fusion	सलमान खान: काँग्रेसबाट लोकसभा चुनाव लड्दै ! » Nepal Fusion
सलमान खान: काँग्रेसबाट लोकसभा चुनाव लड्दै !
बलिउडका नायक सलमान खान काँग्रेस पार्टीबाट चुनाव लड्ने सम्भावना देखिएको छ । काँग्रेसले उनलाई टिकट दिने विषय बाहिर सार्वजनिक गरेपछि उनी सक्रिय राजनीतिमा आउने सम्भावना बढेको हो ।
जब जब चुनाव नजिकिँदै गर्छ कुनै न कुनै सेलिब्रेटीको राजनीति प्रवेशको विषय बाहिर आउने गर्दछ । यस पटक यही चर्चा सलमान खानको बारेमा चलेको हो । केही समय रामानन्द सागरको रामायणमा राम रोल निभाएर लोकप्र‍िय भएका अभिनेता अरुण गोव‍िल कांग्रेसबाट इन्दोरमा चुनाव लड्ने चर्चा चलेको थियो । उनी पछि अहिले भने सलमान खानको चर्चा बाहिर आएको हो ।
केही समय पहिले मध्‍य प्रदेशका मुख्‍यमन्त्री कमलनाथले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सलमान खानको नाम लिएर उनलाई टिकट दिने तयारी रहेको बताएका थिए । अहिले सलमान खान मध्य प्रदेशको पर्यटनको ब्राण्ड एम्बेस्डर बनाइएका छन् । अहिले उनलाई काँग्रेसले इन्दोरबाट नै चुनाव लड्ने सम्भावना रहेको चर्चा गरिँदै आइएको छ । यदि यस्तो भयो भने उनको प्रतिस्पर्धा भाजपाकी नेता तथा वर्तमान लोकसभाकी सभामुख सुमित्रा महाजनसँग हुनसक्ने समेत बताईएको छ ।
सुमित्रा महाजन लगातार ९ पटक सम्म सांसद बनिसकेकी नेता हुन् । सोही कारण सलमानलाई सो इन्दोरमा उठाउन सकेमा सुमित्राको अराजित यात्रामाथि धावा बोल्न सक्ने अपेक्षा देखिन्छ । सलमान खानको पैत्रिक घर पनि इन्दोर नै रहेकोले पनि उनी सो क्षेत्रबाट उठ्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि चर्चा भईरहेको देखिन्छ ।